Fine Thread ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းနှင့်အတူမက်ထရစ် hex အခွံမာသီး - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွဲစေနှင့်ပိုက် Clamp > မက်ထရစ်စွဲစေ > Fine Thread နှင့်အတူမက်ထရစ် hex အခွံမာသီး
ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု price.We တို့နှင့်လည်းမူသောသင်တို့ဆွဲ, နမူနာသို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်များကအခွံမာသီးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, အမျိုးမျိုးသောကာဗွန်သံမဏိ / စက္ကန့ / ကိုယ့်ကိုကိုယ် clinching လူကြိုက်များအခွံမာသီးဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါပဲ။ တစ်ဦးကခွံမာသီးတစ်ပြည်တွင်းရေးချည်နဲ့ဆွဲထားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခွံမာသီးကိုအမြဲအတူတကွအစိတ်အပိုင်းများချိတ်ဆက်ရန်မိတ်လိုက်မူလီနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုကြသည်။
Fine Thread နှင့်အတူ Metric hex အခွံမာသီး၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
ဒဏ်ငွေစေးချည်နှင့်အတူမက်ထရစ် hex အခွံမာသီး၏ရှုထောင့်က ISO 8673 အညီအောက်ပါဇယားမှာပြနေကြတယ်, က ISO 8674 နှင့် ISO မက်ထရစ်ဒဏ်ငွေချည်နှင့်အတူ hex အခွံမာသီးနဲ့ပတျသကျတဲ့က ISO စံချိန်စံညွှန်းများအနေဖြင့် 4759-1 standards.Some အရေးကြီးသောမှတ်စု: - က ISO 8673 ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ပါတယ် မက်ထရစ်ဒဏ်ငွေစေးချည်နှင့်အတူ hex အခွံမာသီး, စတိုင် 1, ၏, အမည်ခံချည်ချင်းတွေနဲ့ချည် M 16dချည်များအတွက်¤ M 16 နှင့်ထုတ်ကုန်တန်း B ကို‰âdများအတွက်ထုတ်ကုန်တန်းတစ်ဦးကအတူ 64 မီလီမီတာအပါအဝင် 8 အထိမီလီမီတာနှင့်အထံမှd။ အိမ်ခြံမြေ: -, (သံမဏိဃâ‰¤ M24 (- ဃâ‰¤ M39 - - အိမ်ခြံမြေလူတန်းစား 6, 8, ဃâ‰¤ M 16 အိမ်ခြံမြေလူတန်းစား 10 သံမဏိ): - ဒဏ်ငွေစေးချည်နှင့်အတူက ISO 8673 hex အခွံမာသီး၏စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ လူတန်းစား A2-70, A4-70, M24 ဃâ‰¤ M39 - အိမ်ခြံမြေလူတန်းစား A2-50, A4-50) - က ISO 8674 အမည်ခံချည်ချင်းအတူမက်ထရစ်ဒဏ်ငွေစေးချည်အတူ hex အခွံမာသီး, စတိုင်2၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဃ 36 မီလီမီတာအပါအဝင် 8 မီလီမီတာအထိ မှစ. , ကုန်ပစ္စည်းတန်းတစ်ဦးကအတူချည်¤‰ M 16 နှင့်ချည်များအတွက်ထုတ်ကုန်တန်း B ကိုဒဏ်ငွေစေးချည်နှင့်အတူက ISO 8674 hex အခွံမာသီးများ M16.- စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများdâdများအတွက်: သံမဏိ - ဃâ‰¤ M 16 - အိမ်ခြံမြေလူတန်းစား 8 နှင့် 12, ဃâ‰¤ M36 - အိမ်ခြံမြေလူတန်းစား 10 ။
Fine Thread နှင့်အတူ Metric hex အခွံမာသီး၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
class 4,5,6,8,10,12; အဆင့် 2, အဆင့် 5; SUS 304, SUS 316
M3-M100 (3 / 16â€™€™â - 4A €™€™â)
က ISO, GB ကို, Din, JIS ဘီ, ANSI, BSW နှင့် Non-စံ
ကာဗွန်သံမဏိ, အလွိုင်းသံမဏိ, သံမဏိ
UNC မှ, UNF, UNS, ကုလသမဂ္ဂ
Zn- ပန်းကန်, နီ-ချထားတဲ့, passive, ဦးတင်-ချထားတဲ့, Sandblast နှင့် Anodize, chromatic, ပိုလန်, Electro ပန်းချီ, Black က Anodize, ရိုးရိုး, Chrome ကိုစသည်တို့ကိုချထားတဲ့
ကာဗွန်သို့မဟုတ်ဂုန်နီအိတ် by ပြီးတော့သစ်သား pallet ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်clientâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ
မော်တော်ယာဉ်စက်မှု, အထွေထွေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, အကြီးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, သတ္တုတွင်း, ရေနံဓါတ်ငွေ့
ကြိုတင်မဲအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် 30% T / T, B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 70%!
Fine Thread နှင့်အတူကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုနှင့် Metric hex အခွံမာသီး၏လျှောက်လွှာ
a ·ပစ္စည်း:သံမဏိ, ကာဗွန်သံမဏိစသည်တို့ကို
a · Surface က:နီကယ်-ချထားတဲ့ဖြူဇင့်အပြာသွပ်ချထားတဲ့, ချထားတဲ့, အရောင်သွပ်ချထားတဲ့။
a · Pack:စက္ဏူထူ box ကို Poly အိတ်များနှင့်စက္ကူအိတ်ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်။
a ·နျ Standard:Din, က ISO, GB ကို, ကို ANSI, JIS ဘီ။
a ·အောင်မင်းအမိန့်:100,00 PCs
a · Size:M3-M30
a ·ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:ထွ, FOB, C ကိုအက်ဖ် CIF အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
a ·ငွေပေးချေမှုရမည့်သက်တမ်း:မျက်မှောက်အချိန်တွင် T / T, L / C ကို။
a ·ထုတ်လုပ်မှုအချိန်:15-20 ရက်။
လျှပ်စစ် tool ကို
Fine Thread နှင့်အတူ Metric hex အခွံမာသီး၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:ကာဗွန်သို့မဟုတ်ဂုန်နီအိတ် by ပြီးတော့သစ်သား pallet ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်clientâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်အရသိရသည်။
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း Fine Thread, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူမက်ထရစ် hex အခွံမာသီး, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality